Sicile-Italia Hakatona ilay ivontoerana mandray mpifindra monina
Nanapa-kevitra ny minisitry ny atitany Italianina, Matteo Salvini, fa hakatona ilay ivontoerana iray mandray mpitsoa-ponenana sy mpifindra monina tao Sicile noho ny fandaniam-bola be loatra.
Io no lehibe indrindra manerana an`i Eoropa. Raha tsiahivina, varavarana iray misokatra ho an`ny vahiny mitsoaka ny taniny ary mihazo an`i Eoropa ity ivontoerana ao Sicile ity. Teratany afrikanina no tena maro amin`izany ka tsy eken`ny minisitry ny atitany intsony ny fisokafany. Ambentin-dresaka nataony izany satria be loatra ireo mpifindra monina sy mpitsoa-ponena ao Italia araka ny fitakiana ataon`ireo vondrona tsy miankina manohana zon`olombelona kanefa tsy manana asa sy toeram-ponenana ka lasa mirenireny sy mameno tanàna fotsiny.